Ixabiso eliphantsi leFlat die Die Fertilizer Extrusion Granulator Machine Suppliers kunye neFektri | YiZheng
Inkqubo ye- Isichumisi seFlat die Extrusion Granulator isetyenziselwa i-granulating yesichumiso, iigranu eziqwalaselwe ngumatshini zinomphezulu ococekileyo kwaye ucocekile, ubulukhuni obulinganiselweyo, utshintsho lobushushu oluphantsi ngexesha lenkqubo, kwaye zinokugcina izondlo zezinto ezingavuthiyo kakuhle.
Yintoni uMatshini wokuGcina isichumisi seFlat die Extrusion?
Isichumisi seFlat die Extrusion Granulator yenzelwe uhlobo ezahlukeneyo kunye series. Umatshini wokufa osisicaba usebenzisa ifom yokuhambisa isikhokelo ethe ngqo, eyenza ukuba i-roller izijikeleze phantsi kwesenzo samandla okuxubana. Impahla yomgubo ikhutshiwe kumngxunya wokushicilelwa ngumbumba yiroller, kwaye iipellets zezilinda ziyaphuma ngediski. Isichumisi seFlat die Extrusion Granulator sisixhobo esibalulekileyo kwishishini lesichumiso, ilungele imveliso enkulu.
Yintoni iFlat Die Fertilizer Extrusion Granulator Machine esetyenziselwa yona?
Isichumisi seFlat die Extrusion Granulator iyilelwe kwaye isetyenziswe kudidi lwemveliso yezichumiso eziindidi ezahlukeneyo. Kwaye kuninzi lwexesha, iyilelwe kwaye isetyenziswe kwisichumiso somgquba kunye nasemgceni wokuvelisa isichumisi. Sinjengabavelisi boomatshini bokuchumisa abachumisi, asiboneleli kuphela ngomatshini omnye we-granulator, kodwa sinokuyila umgca wemveliso yezichumiso ogqibeleleyo kubathengi abahlukeneyo. Kumgca wemveliso yesichumiso, uza kuxhotyiswa ngomatshini we-granulator ngomatshini osisicaba wokufa kunye nomatshini wokubumba ibhola ukwenza i-granulator yesichumiso kwimilo yebhola.
Ngexesha lokusebenza, izinto zixinzelelwa emazantsi nge-roller, emva koko zisikwe sisikrelemnqa, emva koko ziye kumanqanaba amabini opolishiweyo adibeneyo, eqengqelekela kwibhola. Inkqubo ye-Isichumisi seFlat die Extrusion Granulator inezibonelelo zokuma kweqondo lokuma okuphezulu, akukho zinto zibuyayo, amandla aphezulu egranule, ukujikeleza ngokufanayo, ukufuma kwegranule ephantsi kunye namandla okusomisa amancinci.
Iimpawu zoMatshini wokuGcina isichumiso seFlat die Extrusion Granulator
1. Lo matshini ubukhulu becala usetyenziselwa ukulungiswa kwegranule yezichumiso zezinto eziphilayo kunye noshishino lokulungisa ukutya.
2. Iigranubale ezenziwa ngu Isichumisi seFlat die Extrusion Granulator zinomphezulu ogudileyo nococekileyo, ubulukhuni obulinganiselweyo, amaqondo obushushu asezantsi anyukayo ngexesha lenkqubo, kwaye anokugcina izakha-mzimba zemathiriyeli eluhlaza kakhulu.
3. Iigrafu ezingafaniyo, ububanzi begreyidi bunokwahlulwa: Φ 2, Φ 2.5, -3.5, Φ 4, Φ5, ,6, Φ7, Φ8, njl. Njl. Abasebenzisi banokukhetha ngokweemfuno zokwenyani.
4. Isiqulatho sokufuma seGranule sisezantsi kwaye silungele ukugcinwa kunye nokuthuthwa, ngenxa yoko iphucule kakhulu inqanaba lokusetyenziswa kwezinto.
Iimpawu zeFlat die Fertilizer Extrusion Granulator Machine
►Imveliso egqityiweyo ye-granule cylindrical.
►Umxholo we-organic unokufikelela kwi-100%, wenze i-organic granulate emsulwa
►Sebenzisa i-organic granule yento ebonakalayo kunye nokuba nkulu phantsi kwamandla athile, akukho mfuneko yokongeza i-binder xa ugranulating.
►Imveliso yegranule yomelele, inokubulala ngokuthe ngqo emva kwegranulation ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kokoma
►Emva kokuvumba kwendalo akufuneki ukuba zome, ukufuma kwento eluhlaza kunokuba kwi-20% -40%.
Isichumisi seFlat die Extrusion Granulator Umatshini weVidiyo
Isichumisi seFlat die Extrusion Granulator Machine Model
Imveliso (t / h)
Izinga lokukhupha (%)
Ukunyuka kwamaqondo obushushu eGranule (℃)
Egqithileyo Uhlobo olutsha lweOrganic kunye necomputer yesichumisi seGranulator
Okulandelayo: I-Screw Double Extruding Granulator
Intshayelelo Yintoni umatshini wokucoca isichumisi oxwesileyo? Umatshini wokuHlanganisa wezichumisi oxwesileyo une-shaft esembindini eneebhle ezi-angled ngeendlela ezahlukeneyo ezibonakala ngathi ziiribhoni zentsimbi ezirhangqwe nge-shaft, kwaye iyakwazi ukuhamba kumacala ahlukeneyo ngaxeshanye, iqinisekisa ukuba zonke izithako zidityanisiwe. IHorizonta yethu. ..
Intshayelelo Yintoni i-Twin Screw Extrusion Extrusion Granulator Machine? Umatshini we-granulation we-Double-Screw extrusion yitekhnoloji entsha ye-granulation eyahlukileyo kwi-granulation yemveli, enokusetyenziswa kakhulu kukutya, isichumiso nakwamanye amashishini. I-Granulation yinkqubo ebalulekileyo ngokukodwa kwi-powder granulation eyomileyo. Ngu ...